musha » Featured » IBC 2018 - Ongororo yeRos ye #BCShow
David Ross, CEO we Ross Video
IBC nderimwe remabhizimisi makuru emakambani ekubudisa uye inopa mukana unokosha wekugadzira vusiki kuti vauye uye kuona zvakaitika munguva pfupi mukugadzirwa kwekombiyuta. Zvinosuruvarisa, ihwowo chiitiko che 4-chiitiko chakaitwa pamazuva e5, uye kuderera kwemashamba evashanyi gore rino kunofanira kuwedzera kuwanda kune manzwi mazhinji pakati pevakakuruku vakura vachikumbira kuchinja kuhuwandu uye kuderedzwa kwehurefu hworatidzwa. Mushure mezvose, kana NAB inogona kutakura kune vakadarika 93,000 mumazuva 4, hapana chaicho chikonzero chinokurudzira nei IBC va55,000 vanoenda vachida 5.
Zvematongerwo enyika kunze, kuratidzwa kwegore rino kwakanga kuchijeka kwezuva uye kunopenya zvakajeka pane zvitsva zvinotengeswa kubva kune mabhii akawanda makuru, ne Ross Video iri chinhu chinoshamisa. Ross akauya kuBC ne 21 brand new products uye zvinyorwa zvitsva kubvira NAB munaApril - ainakidza neanomunhu wese. Pamusoro pezita rezvinhu zvitsva zvinofanira kuva Carbonite Ultra, iyo itsva 1RU 3ME platform switcher kubva ku Ross. Carbonite Ultra inotanga pasi pe $ 11k urongwa hwe US ​​uye inosanganisira zviratidzo zvakawanda zvekushanda kweI / O kuti vamwe vatengi vaitenga iyo semushandisi wepisiti! Uyezve itsva kubva kuRoss gore rino Ultritouch, a full-customizable and configurable touchscreen panel for system control and monitoring.
Ultritouch inogona kugadziriswa nokukurumidza kuti iite zvidimbu zvekushanda se router, multiviewer uye zviratidzo zvekugadziriswa kwemashoko, asi simba rayo rechokwadi inokwanisa kuita chero chaunoda iwe, kunyange iwe uchida. Chimwe chiziviso chigadzirwa chakanga chiri PIVOTCam-SE, new compact 24 megapixel kamera ne 23x optical zoom. PIVOT-Cam inopa hutano hwakasimba zvikuru pane imwe nzvimbo inosvikika yekutengesa - yakanaka kune zvigadzirwa apo nzvimbo inotangira kana mari inoshandiswa.
Kunze kwekugadzirwa kwekugadzirwa kwezvinhu, kwaive kunonakidza gore rino kuti uone kuenderera mberi kuchikwira mukududzirwa kwe12 SDI senzvimbo. Makore akati apfuura apfuura, ndakashanyira makambani makuru e semiconductor uye ndakawana kusada kwekufunga kufunga chikwata che 12G nokuti, kudzokorora mumwe mugadziri, "makwikwi ako ose anotaura kuti remangwana IP. Ndakavakumbira kuti "vaite chips kwandiri uye vamwe vachitevera". Zvechokwadi, ivo vakatevera Ross uye kune iye zvino nhamba inokura yezvigadzirwa zve 12G mumusika kubva kune vese vanogadzira makuru, vachisimbisa chisarudzo chedu chekusimbisa 12G uye kuti tirambe tichigadzira michina kudarika SDI, 12G uye mapuratifomu ePI. Tinotenda kuti 12G inomirira nzira inosvikeka, inobudirira uye inobudirira yekuvandudza nzira yevatengi vasingadi kuita shanduko yakawanda mune zvigadziridzo zvePI. Hatisi kuramba kukosha kweP IP, uye, uye tinofara kwazvo kubatsira vatengi vanoenda kune imwe-IP-based workflow kana iyo ndiyo inofanirwa kuenda, asi tinoedzawo kuva pragmatic uye kubatsira semhando dzakasiyana siyana wevatengi sezvatingaita. Vazhinji vakawanda vanoparadzira pasi pose vachiri kushanda muDD, uye ini ndinopokana kuti CTOs dziri kuchengetwa usiku usiku nekushungurudza pamusoro pekufamba kwePI. Ava vatengi vanofanirwawo kuR Ross sezvimwewo, uye ini handidi pfungwa yekuvaudza kuti hatigoni kuvabatsira kuti vakunda bhizinesi, zvekugadzira nekugadzirisa zvinetso zvavanosangana nazvo zuva rega rega. Apo ndakabvunzwa mutori wenhau kuBC gore rino nokuda kwemaonero angu pamusoro pekukurumidza kwekugamuchirwa kweP, ndakapindura nokutaura kuti zviri kuwedzera, asi kukurumidza kwekugashira kwe12G SDI kuri kuwedzera panguva yakakurumidza. Hapana chidikanwi chevashandi kuti vave makwaiish pamusoro peC12G - kune vhizimusi vanoda uye mabhizimisi mazhinji akawanda kunze kweavo vakagadzirira kutamba mutambo wakareba mumisika yedu yakare-misi.
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pezvibereko zvakatangwa paBCC Ross Video, Tapota shanya www.rossvideo.com/IBC/
Broadcast Engineer Broadcast Engineering CES2017 David Ross Digital Nirvana IBC Media monitoring MStar Ross Video SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Arrows Subtitling subtitling, Digital Nirvana, media monitoring, IBC Ultra HD Forum Video Engineer	2018-09-27
Previous: Plura Kuti Ubudise Pasi-Kuputsa Zvinhu pa #NABShow New York
Zvadaro: AV Inoshandiswa Injiniya